महिला सांसदको गुनासो: भन्न मात्रै नसकेको, महिला भन्दा पुरुष धेरै पीडित छन् ! | सुदुरपश्चिम खबर
महिला सांसदको गुनासो: भन्न मात्रै नसकेको, महिला भन्दा पुरुष धेरै पीडित छन् !
काठमाडौँ – सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले पछिल्लो समय पुरुषहरु महिलाबाट पीडित हुने गरेको तर न्याय नपाएको दावी गरेकी छन् ।
‘पुरुषहरुकहाँ जाने न्याय खोज्न ? महिलाले कति अन्याय गरेको छ पुरुषमाथि । श्रीमान विदेशमा काम गर्न जाने, यता श्रीमति अर्कै केटोसँग घुम्ने, भएभरको सम्पत्ति कुम्ल्याएको छ ।
पुरुषहरु विदेशबाट आएर राम्रो लाउँला, राम्रो खाउँला, परिवारलाई दिउँला भनेर विदेशिएका हुन्छन् । श्रीमति पूरा पैसा, सम्पत्ति लिएर अरुसँग गएको हुन्छ । अनि तिनिहरु कहाँ न्याय पाउने ? हामी सबै महिला ठीक भनेर हुँदैन, महिला भन्दा पुरुष धेरै पीडित छन् । भन्न मात्रै नसकेको हो ।’
सांसद चौधरीले यसअघि संसद बैठकभित्रै सांसद सरिता गिरीमाथि धम्की दिएर विवादमा तानिएकी थिइन् । महिला तथा सामाजिक समितिमा राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा सांसद गंगा चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने पुरुषहरु पीडित हुने गरेको भन्दै महिला सांसदहरुले गुनासो गरेका थिए । आफ्नो श्रीमतीलाई विश्वास गरेर सबै सम्पत्ति सुम्पिएर विदेश गएको हुन्छ पुरुष । तर आउँदा सम्पत्ति हुँदैन, घर पनि हुँदैन । श्रीमती पनि हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद हिरा गुरुङले भनेकी थिइन् । महिला आयोगले महिला मात्रै नभएर महिलाबाट पीडित पुरुषलाई पनि न्याय दिनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
आयोगी सचिव शान्ता भट्टराईले भने श्रीमानको सम्पत्ति लिएर अन्यत्र जाने महिलाहरु भए पनि, यथार्थमा त्यो सम्पत्ति लैजाने चाहिँ अर्को पुरुष भएको तर्क गरेकी थिइन् । श्रीमान विदेशिएपछि अन्य कुनै पुरुषबाट महिला नै ठगिने गरेको यथार्थ पेश गर्दै उनले आयोगले पीडित पुरुषहरुबारे मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताइन् ।
बजाजको दशैं अफर: २०% डाउन पेमेन्टमा पल्सर १२५ किन्दा यस्तो छ...
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालका लागि आधिकारिक वितरक हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले आजबाट चाडपर्व लक्षित ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ल्याएको...
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक
काठमाडौं, असोज ६रशिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले...
उखु किसानले पाउने भए सरकारले तोकेको अनुदान
सरकारले तोकेको उखुको अनुदान रकम किसानले पाउने भएका छन्। गत वर्षको उत्पादनमा सरकारले दिने भरेर घोषणा गरेको रकम सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा...